Bollywood & Netflix: 5 ka mid ah filimadii ugu fiicnaa Bollywood ee laga heli karo Netflix | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Bollywood & Netflix: 5 ka mid ah filimadii ugu fiicnaa Bollywood ee...
Bollywood & Netflix: 5 ka mid ah filimadii ugu fiicnaa Bollywood ee laga heli karo Netflix
Bixid, Aamir Khan, Sharukh Khan iyo Kajol.
USA (Halqaran.com) – Waayadan dambe waxaa la sheegaa in Bollywood-ka uu ka sare maray shirkadaha Hollywood-ka iyo Nollywood-ka labadaba, haddana uu yahay shirkadda filimada ee ugu weyn caalamka.
Haddaba, shirkadda baahisa filimada ee Netflix – oo soo saarta filimo iyada u gaar ah – ayaa sidoo kale soo aruurisay qaar ka mid ah filimadii ugu xiisaha badnaa ee Hollywood-ka Mareykanka iyo Bollywood-ka Hindiya. Filimadaas waxaa ka mid ah shan xul ah oo horay looga sameeyay Bolywdoodka, dad badanna ay ilaa hadda xiiseeyaan.
Haddii aad ku caajistay aqris ama waxyaabo kale waad milicsan kartaa filimadaas oo ay hubaal tahay in ay ku madadaalin doonaan. Inta badan filimada Bollywood-ka waa labo saacadood iyo wax ka badan, sababtoo ah waxaa ku jira heeso dhammeystiran iyo sheekooyin qosol leh.
Kuwani waa shanta ugu caansan filimada Hollywood-ka ee Netflix laga daawan karo iyagoo qoraal Ingiriis ah la dul saaray si loogu fasiro.
1- Kuch Kuch Hota Hai (Wax baa dhacaya) 1998
Filimkan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan ee Bollywood-ka Hindiya, inta badan dadka filimada xiiseeyana ay wada daawadeen. Laakiin waxaa laga yaabaa in aadan aqoonin fasiraadda magaciisa ee afsoomaaliga ah.
Jilayaasha ugu muhiimsan filimka Kuch Kuch Hota Hai, Rani Mukerji (bidix) Shahrukh Khan iyo Kajol
Wuxuu ka sheekeynayaa qisada saddex dhalinyaro ah oo uu jacayl dhex maray, wuxuuna soo baxay sanadkii 1998-kii.
Dad badan marka ay filimkan ka sheekeynayaan waxay kuu sheegayaan inuu ahaa filimkii ugu horreeyay ee jacayl ah oo ay daawadeen, inkastoo ay jiraan kuwo kale oo kasii horreeyay, aadna u xiiso badan.
Qisada: Anjali iyo Rahul oo saaxiibbo isku fiican ah ayay machadkooda usoo wareegeysaa Tina, xilli ay ku jireen sanadkii ugu dambeeyay.
Jacayl saddex geesood ah ayaa billaabanaya marka ay Anjali dareento inay jeceshahay saaxiibkeed. Laakiin Rahul indhihiisa waxay hayaan Tina oo marka si loo fiiriyo ka reer magaalsan Anjali, isaguna waligiisna wuxuu ahaa wiil gabdhaha iska fowdeeya.
Sannado kaddib, gabdha ay Tina oo geeriyootay u dhashay Rahul ayaa iyadoo siddeed jir ah isku dayeysa inay dib u mideyso aabbeheed iyo Anjali.
2- Kabhi Kushi Kabhie Gham (Mararka qaar farxad, mararka qaarna murugo) 2001
Waa filim kale oo xambaarsan qiso jacayl oo soo jiidasho leh. Waxaa filimkan si deg deg ah looga jeclaaday guud ahaan Hindiya iyo meelo badan oo ka mid ah dunida.
Jilayaasha ugu muhiimsan filimkan oo sidoo kale ka mid ah kuwa ugu caansan Bollywood-ka waxay kala yihiin Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Rani Mukerji, Kajol, Kareena Kapoor iyo Hrithik Roshan.
Wuxuu soo baxay sanadkii 2001, wuxuuna ku saabsan yahay arrimo qoys, sharaf raadin, jacayl iyo xiriirka dhinaca bulshada.
Qisada: Yash oo ah ganacsade taajir ah ayaa doonaya in uu wiilka uu soo korsaday, carruurtiisana ugu weyn, Rahul, ka dhaxlo dhaqankiisa. Laakiin dhibaato ayaa qoyska dhexdiisa ka billaabaneysa marka uu Rahul jeclaado Anjali oo kasoo jeeda qoys dan yar ah.
Yash wuxuu kasoo hor jeedsanayaa xiriirkooda kaddibna wuxuu deyrinayaa wiilkiisa. 10 sano kaddib, Rahul walaalkiis ka yar, Rohan, ayaa go’aansanaya in uu UK waxbarasho u aado, halkaasoo ah meesha ay ku nool yihiin Rahul iyo qoyskiisa. Islamarkiiba waxaa billaabanaya howlgal uu Rohan dib ugu mideynayo qoyskiisii kala irdhoobay.
3- Dostana (Saaxiibtinnimo) 2008
John Abraham iy Abhishek Bachchan.
Filimkan majaalida badan ay ku jirto waxaa hoggaamineysa atariishada caanka ah ee Priyanka Chopra, oo sidoo kale qaarkiin aad u taqaannaan xaaska Nick Jonas. Sidoo kale waxaa kaalmaha ugu muhiimsan ka qaadanaya atooreyaasha magaca ku leh Bollywood-ka ee kala ah John Abraham iyo Abhishek Bachchan.
Filimkan waxaa ka buuxa qisooyin isugu jira jacayl, qosol iyo farxad. Wuxuu si gaar ah u khuseeyaa saaxiibtinnimo been ku dhisan laakiin waa mid madadaalo fiican leh.
Qisada: Sameer oo ah kalkaaliye iyo Kunal oo sawir qaade ah ayaa si been abuur ah u matalaya in ay yihiin niman aan dumarka daneynin si ay guri ku yaalla Miami ula dagaan Neha. Markii ay xoogaa waqti ah islula qaataan si wadajir ah, Sameer iyo Kunal labadooduba waxay isla jeclaanayaan haweeneyda qolka la daggan.
4- 3 Idiots (3 Nacas) 2009
Filimkan wuxuu ku saabsan yahay dhinaca maskaxda iyo caqliga, aad ayuuna u shactiro badan yahay. Wuxuu xiiso galinayaa qof walba oo da’ kasta leh.
Marka laga soo tago majaajiladiisa, wuxuu wataa cashirro ku saabsan dhinaca niyadda ah iyo nolosha dhabta ah.
Qisada: Saddex arday oo dhigta maaddada injineernimada, oo kala ah Farhan, Raju iyo Rancho ayaa isugu imaanaya Jaamacadda ugu wanaagsan Hindiya, waxayna noqonayaan saaxiibbo. Dabeecadaha dhinaca wanaagsan ee uu leeyahay Rancho ayaa ku dhiirrigalinaya Farhan iyo Raju inay raadsadaan waxa ay dhab ahaanta u doonayaan. Markii ay ka qalin jabiyaan Jaamacadda, Rnacho ayaa la weynayaa, hal sano kaddibna, Farhan iyo Raju oo guulo fiican ka gaaray nolosha dhiirrigalintii saaxiibkood Racho awgeed ayaa isku dayaya inay si wadajir ah u raadiyaan.
5- PK (Qof cabsan) 2014
Waa filim ka mid ah kuwa ugu fiican ee tobankii sano ee lasoo dhaafay uu soo jilay xiddigga Bollywoodka, Aamir Khan. Haddii aad atoorahan taqaanno ama filimadiisa daawatay waad ogtahay sida uu xirfadda ugu leeyahay madadaalada iyo jilitaanka.
Jilayaasha kale ee ka dhex muuqda waxaa ka mid ah Anushka Sharma, Sanjay Dutt, Ranbir Kapoor iyo Sushant Singh Rajput.
Qisada: Nin yimid meere qalaad ayaa imaanaya dhulka wuxuuna isku dayayaa inuu dib ugu laabto halkii uu ka yimid. Inta uu ku guda jiro dadaalka uu isugu dayayo sidii uu ugu noqon lahaa meerihii uu ka yimid wuxuu billaabayaa inuu soo bandhigo su’aalo uusan horay qofna u keenin. Ninkan oo magaciisa loo soo gaabiyo “PK” wuxuu doonayaa inuu wax walba ogaado sida carruurta kaddibna waddanka ayuu ku kallifayaa inuu qiimeyn ku sameeyo saameynta ay diintu ku leedahay shacabka.